Izindaba - Uhlelo oluphuthumayo lokubhola lwezingozi zamakhemikhali eziyingozi
Kwabanjwa imishini ebanzi yezimo eziphuthumayo ezindaweni eziyingozi epulazini lamathangi. I-drill ilandele eduze ukulwa kwangempela, kugxile ekufaniseni ukuvuza kwempahla, ukufaka ubuthi kubasebenzi nemililo emapulazini aseduzane ngesikhathi kulayishwa futhi kuthululwa amaloli epulazini lamathangi. Indawo yokusebenzela yomphakathi yaqala ngokushesha ukusabela okuphuthumayo. Umqondisi we-workshop uZhang Libo uyalele ukusungulwa okusheshayo kwethimba labezimo eziphuthumayo, ithimba labaphumayo, ithimba eliqapha imvelo, iqembu lokuqeda ukungcola, ithimba eliqaphile, iqembu lokufafaza umlilo, kanye nethimba lezokutakula lezempilo ukuze liqondise umsebenzi wokuphendula ophuthumayo futhi lenze okokuqala. Ukuhlenga okuphuthumayo.
Ngesikhathi sokuzivocavoca, iqembu ngalinye lenze ngendlela ehlelekile futhi esheshayo ngokuya ngezidingo, izibopho, kanye nezinqubo zomsebenzi wokuhlenga. Abaholi bayala ngokucophelela futhi bathumela ngokuqonda, futhi bonke ababambe iqhaza kulo msebenzi babambisana ngokugcwele futhi basebenza endaweni, behlangabezana nezinkomba ezilindelekile zokuprakthiza eziphuthumayo. Lo msebenzi awuzange nje uthuthukise ikhono lenkampani lokuphendula ezimweni eziphuthumayo lapho kuthathwa izinqumo, ukulawulwa, ukuhleleka nokuxhumanisa, kuqinise ukuqwashisa ngobungozi nokuqwashisa ngomlilo ngamakilabhu nabasebenzi ekuphenduleni izimo eziphuthumayo, kepha futhi kuthuthukise nezimo eziphuthumayo ezikhona esizeni isivinini sokuphendula, ukuphatha amakhono nezinga lokulwa langempela, Kubekwe isisekelo esiqinile sokwenza ukukhiqiza okuphephile ngenkuthalo nokwakha ibhizinisi eliphephe ngokwangaphakathi.